ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: သွေးချင်းတွေ အပေါ် ဒီလို မလုပ်စေချင်
သွေးချင်းတွေ အပေါ် ဒီလို မလုပ်စေချင်
အမိမြေမှာ ကပ်တွေ ဆိုက်နေချိန် ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေက ပြည်တွင်းက ဒုက္ခသည်တွေကို သွေးချင်းလို သဘောထားပြီး ချွေးနှဲစာ တွေထဲက တချို့ကို မျှဝေ လှူဒါန်း ကူညီကြတာ အဆိုးထဲက အကောင်း အဖြစ် မှတ်ယူ နေကြရတာပါ။ ၂၀၀၈ ကစပြီး သိသာလာတဲ့ ကပ်ဘေးတွေက နာဂစ်၊ ဂီရိ၊ သောက်သုံးရေ ရှားပါး ပြတ်လပ်မှု အပြင် စစ်မက်ဘေးကြောင့် ထွက်ပြေး လာကြတဲ့ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်တွေ ဇယ်ဆက်သလိုမို့ လူမှု ရေး အသင်းအဖွဲ့တွေ လက်မလည်ရ ပါဘူး။ လတ်တလော ကူညီကယ်ဆယ်ရေး အပြင် ကပ်ဘေး ကြီးကြီး ထိတဲ့ နေရာတွေများ နှစ်ချီပြီး ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်နေရတာတောင် ခုထိ အခြေခံ လိုအပ်ချက် တောင် မပြည့်မီသေးတာမို့ ကုလသမဂ က ပါ နိုင်ငံတကာကို ဆော်သြ အလှူခံ နေရချိန်ပါ. တောမီးလောင် တော ကြောင် လက်ခမောင်း ခတ်ချိန်မို့ တချို့ စာရိတ္တ ရေချိန် မပြည့်သူတွေက လူမှုရေး အမည်ခံ လုပ်စားသူတွေ အလွဲသုံးစား လုပ်သူတွေ ရှိသလို လူမှုရေး မလုပ်တတ်ဘဲ နာမည်ယူ နေရာ ယူချင်ရုံ သက်သက် ကျော်ကြားမှု ကိုမက်ပြီး ဇော်ကန့်လန့် လုပ်သူတွေ၊ ဘုရင့်ဥယျာဉ် ရေ၀င်လောင်းတဲ့ မျောက်တွေလို လူစားတွေလဲ ရှိတာမို့ အလှူရှင်တွေရဲ့ အလှူပစ္စည်းတွေ အလှူငွေတွေက မလိုအပ်ဘဲ ဖိတ်စဉ်လေလွင့်ကုန်တာတွေလဲ မနည်းပါဘူး။
သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ များတဲ့ ကျွန်မမှာ ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေ တခုခု ဖြစ်ရင် အမိမြေမှာတခုခု ဖြစ်ရင် ကိုယ် နဲ့ မဆိုင်သလို လက်ပိုက်ကြည့် မနေ တတ် တဲ့ အားနည်းချက်ကြောင့် နာဂစ် မုန်တိုင်း ဖြစ်စဉ်က စလုပ်မိ ထားတဲ့ လူမှုရေး အဖွဲ့ တခုမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက မြန်မာတွေရော နိုင်ငံခြားသား မိတ်ဆွေ တွေ ကပါ လှူဒါန်းချင်လို့ ဆက်သွယ်လာခဲ့ရင် သူတို့ လှူချင်တာ စိတ်စေတနာ ပေါက်တာပေါ် မူတည်ပြီး သက် ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ကျွန်မက ချိတ်ဆက်ပေးလေ့ ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ အနေကြာတဲ့ လူတွေမို့ ပြည် တွင်းမှာလဲ ယုံကြည် စိတ်ချရတဲ့ ဘယ်အဖွဲ့အစည်း က ဘာတွေ လုပ်နေတယ် ဆို တာ သိချင်လို့ မေးလာ ရင် ကျွန်မက ကျွန်မသိတဲ့ ကျွန်မ ယုံကြည် စိတ်ချတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို လမ်းညွှန်ပါတယ်။ လိုနေ တာ အများ သား သဒ္ဓါ ပေါက်တာ ရေလှူဖို့လား သီတဂူ ဆရာတော်ဆီ သွားပါ။ အလောင်းကောက် ရေသန့်ဝေ ဖို့လား ရုပ်ရှင် မင်းသား ကျော်သူရဲ့ နာရေး ကူညီမှု အသင်းဆီ သွားပါ။ ဆေးလှူချင်သလား သင်္ဘော စီးလုံးငှားပြီး ဆေးလည်ကု ပေးနေတဲ့ ရွှေည၀ါ ဆရာတော်နဲ့ ဆက်သွယ်ပါ။ သွေးလွန်တုပ်ကွေး လို ရာသီပေါ် ရောဂါတွေ ကာကွယ်ရေးအတွက် လှူချင် သလား ရေဗန် သွေးလှူရှင် အသင်း ရှိပါတယ်။ မိဘမဲ့ကလေးတွေ ကူညီ ထောက် ပံ့ ရေး အတွက် ဆိုရင်လဲ MOSN ကို ကျွန်မ ညွှန်ပေးပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ကျွန်မရဲ့ မိတ်ဆွေတိုင်း နဲ့ အဲဒီ အဖွဲ့တွေ သိကြပါတယ်။
ဘာကြောင့် ကိုယ့်အဖွဲ့ကိုယ် မလှူခိုင်း လဲ မေးလာရင် အဖြေ အသင့်ရှိပါတယ်။ အလှူတွေ သဒ္ဓါပေါက် ရာတိုင်း အကောင် အထည် ပေါ်အောင် မလုပ်နိုင်လို့ပါ။ အဲလောက် ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် လုပ်နိုင် လောက်အောင် တာဝန်မယူနိုင် လူအင်အား မတတ်နိုင်လို့ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါဖြင့် ကျွန်မတို့ အဖွဲ့ ဘာလုပ်ခဲ့လဲ မေးလာရင် ဒါတွေ လုပ်ခဲ့တယ် ဆိုတာ စလုပ်စဉ်ကနေ ခုချိန်ထိ ငွေတကျပ်တပြား က အစ စာရင်း အတိအကျ ဓာတ်ပုံများ နဲ့ တကွ သက်သေ ပြနိုင်လောက်အောင် ကြေညာ ထား ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အဖွဲ့ သစ္စာ ဆိုနိုင်တာကတော့ အလှူငွေ တပြားတချပ် ကိုမှ လုပ်ငန်းအတွက် ခရီးစရိတ် အဖွဲ့သားတွေရဲ့ စားစရိတ် အတွက် မယူ မသုံးတာ ပါပဲ။ သြ၀ါဒ ဆရာတော် ရဲ့ စကားတခွန်းက အင်မတန် ထိရောက်ပါတယ်။ နင်တို့နော် လေဘေး ဒုက္ခသည်ရဲ့ လာဘ်လာဘကို ခိုးစားရင် နောင်ဘ၀ နင်တို့ လေဘေး ဒုက္ခသည် ဖြစ်တဲ့ အခါ နင်တို့ရဲ့ ရှားရှားပါးပါး လာဘ် လာဘတွေ သူများ ခိုးစားတာ ပြန်ခံရမယ် ဘယ်လောက် သနားစရာ ကောင်းမလဲ ကိုယ်ချင်းစာ ကြည့်စမ်း တဲ့။ ကျွန်မတို့ ထိုင်းကော်မတီ ဟာလဲ မဟာချူလာလောင်ကောင် တက္က သိုလ် မှာ မဟာတန်း တက်နေတဲ့ မြန်မာ သံဃာတော် တွေ ဦးစီးတာ ဖြစ်သလို မြန်မာကော်မတီဟာလဲ သတင်း စာ အယ်ဒီတာဟောင်းတွေ ဆေး တက္ကသိုလ် က ကထိကတွေ စတဲ့ ပညာတတ် လူကြီးလူကောင်းတွေ ဦးစီး လုပ်နေတာပါ။ ရွာကျောင်းက ဆရာတော် ကလဲ နိုင်ငံတော် သံဃ မဟာနာယက က ထောက်ခံထားတဲ့ စာရေး ဆရာ ပညာတတ် သာသနာပြု ဆရာတော်ပါ။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မတို့တွေဟာ ကိုယ့် ချွေးနှဲစာ ကိုယ့်လခနဲ့ ကိုယ်လှူ၊ စရိတ်အဖြစ် သုံးပါတယ်။ နာဂစ် ဒဏ်ခံ ရတဲ့ အထဲက အခြေအနေ အဆိုးဆုံးနဲ့ လူသူ အရောက်အပေါက် အနည်းဆုံးမို့ ဘာ အကူအညီမှ မရကြ ရှာတဲ့ ချောင်းကြို မြောင်းကြားက ရွာသိမ် ရွာငယ်လေးတွေဆီကို ကိုယ့်စားရိတ် ကိုယ်ခံ ရှာဖွေ သွားရောက်ပြီး လှူပါ တယ်။ အပေါ်နေပူ အောက်က ဆားငံရေ စိမ်ထားလို့ မပုပ်နိုင်တဲ့ လူသေအလောင်း ရာနဲ့ချီပြီး ချာလပတ် လည်အောင် မျောနေ လှည့်နေတဲ့ ရေ၀ဲကြီးတွေကို သက်စွန့် ဆံဖျားကျော်ပြီး နာရီနဲ့ချီ ပဲ့ထောင် စီးရတဲ့ ရွာသိမ် တွေ ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ နေရာကိုရောက်တော့ ပီနံအိတ်ဝတ်ပြီး အသံပျောက်နေတဲ့ ရွာသားတွေကို တွေ့ပါတယ်. စားစရာ အုန်းသီး သောက်စရာ အုန်းရေပဲ ရှိတော့လို့ပါ။ ဒီလိုနေရာတွေက ရွာသားတွေမှာ စိတ်ဓာတ် အကျ ကြီး ကျနေရာက အလှူရှင် အဖွဲ့ကို တွေ့တော့ စကားမပြောနိုင်အောင် ၀မ်းသာပြီး ငိုကြပါတယ်။ ဘ၀ကို တစ်ကနေ ပြန်မစ၊ အနှုတ်ကနေ ပြန်စရတဲ့ ရွာသားတွေ သူတို့ရဲ့ ကလေးငယ်တွေ… နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ သာမန် လောက် ဒုက္ခရောက်တာလို့ ပြောနိုင်တဲ့ အလုပ်ပြုတ်တဲ့ အလုပ်အဆင်မပြေတဲ့ လူတွေတောင် ဒီလောက် စိတ်ဓာတ်ကျရင် စည်းစိမ် မိသားစု အိမ်နီးချင်း ဘ၀ပါ ပျက်တယ်လို့ ပြောရလောက်တဲ့ ဒီကပ်ဆိုးကြီး ဒဏ် ကနေ ရုန်းထရတာ ဘယ်လိုမှ မလွယ်ပါဘူး။
လယ်ပြန်စိုက်ဖို့ အိမ်ပြန်ဆောက်ဖို့ မဆိုထားနဲ့ သောက်ရေကန် ပြန်ဆယ်ဖို့ တောင် ပေါက်တူးမရှိ ဓားမရှိ၊ သေချင် လောက်အောင် စိတ်ဓာတ်ကျ နေတဲ့ လူတွေကို လုပ်ချင် ကိုင်ချင်စိတ် ပြန်ရှိလာအောင်၊ တနေ့စာ တနေ့ ဘယ်လိုရှာစားရမှန်း မသိ ဖြစ်နေတဲ့ မိဘတွေကို သူတို့ သားသမီးတွေကို ကျောင်းထားချင် လာအောင် ပြီးတော့ ကလေးတွေကိုလဲ ကျောင်းပြန် နေချင်စိတ်ပေါက် လာအောင်၊ ပြောရတာ လွယ်တဲ့ အလုပ် မဟုတ်ပါ ဘူး။ တဖက်ကလဲ ကျောင်းဆောက်ရသလို စာသင် ပေးမယ့် ဆရာ ရှာရတာလဲအလုပ်ကြီး တလုပ်ပါ။ အင်မတန် ခေါင်လွန်းတဲ့ ရွာလေး ဆီမှာ ဘ၀ကို နှစ်မြှုပ်ပြီး လာနေ စာသင် ပေး ချင်မယ့် ဆရာတွေနဲ့ အဲဒီ ဆရာတွေ အတွက် လုံလောက်တဲ့ စားဝတ် နေရေး ဖန်တီးပေးရတာ လဲ အပြော ထက် အလုပ် ခက်တာ လုပ်ဖူးသူတွေ သိမှာပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ရဟန်းတော် များက သူတို့ အလှူခံ လို့ ရတဲ့ န၀ကမ္မ ငွေစလေး တွေနဲ့ ကျောင်းသူ ကျောင်း သား တွေက သူတို့ မုန့်ဖိုးလေးတွေနဲ့ ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာ အလုပ်သမား တွေက သူတို့ရဲ့ နေ့စားခ လေးတွေ နဲ့ တပိုင်တနိုင် စုပေါင်း လှူဒါန်းပြီး ဖျာပုံ မြို့နယ်စု ထဲက ပင်လယ်ဝမှာ ရှိတဲ့ ရွာသိမ်လေး တရွာကို စုပေါင်း ကူညီ ပံ့ပိုး ပေးနေခဲ့ကြပါတယ်။
ထိုင်းအခြေစိုက် ကော်မတီက အလှူငွေစု၊ ရန်ကုန် အခြေစိုက် ကော်မတီက အလှူငွေ တွေကို တလတခါ ၂လ တခါ ဆိုသလို ရွာကို ငွေလွှဲ၊ တခါတလေ ကိုယ်တိုင် သွားပို့ရင်း ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော် လဲဖြစ် ဘုန်းတော် ကြီးသင် ပညာရေး ကျောင်း က ဆရာတော်လဲ ဖြစ်တဲ့ ဆရာတော် ဦးသုဒဿန နဲ့ ကပ္ပိယ များ ရွာမိရွာဖ များနဲ့ တိုင်ပင် ဆွေးနွေးပြီး အခြေအနေ တိုး တက်မှုကို ဆန်းစစ် လေ့လာ ရပါတယ်။ အခြေအနေ တွေကို ရန်ကုန် ကော်မတီ က ထိုင်း မှာရှိတဲ့ ကော်မတီကို အကြောင်း ကြားပြီး လိုအပ်သည် များကို ထပ်ပြီး ပံ့ပိုး ရပါတယ်။ ထိုင်းကော်မတီ ကလဲ ဖြစ်သင့်တာ ဖြစ်စေ ချင်တာ တွေကို ပြောပြပြီး လုပ်နိုင် မလုပ်နိုင် ပြန်မေးရ ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဆရာတော် တပါးနဲ့ ကိုရင်ကြီး တပါးက ကျောင်းသား အယောက် ၁၅၀ကို ဘာသာစုံ သင်ပေး တဲ့ ဆရာအဖြစ် သင်ကြားပေး နေရတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းလေးဟာ ကျောင်း ဆရာ ၅ယောက် တိုးချဲ့ ပြီး ကျောင်းသား ၃၅၀ ကို စာသင်ပေးနေတဲ့ ဘုန်းတော် ကြီးသင် ပညာရေး ကျောင်းလေး ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ်။
တဖက်က ဒီလို စီစဉ်နေရချိန်မှာ တခြားတဖက်က ဖြေရှင်းနေရတာ ကတော့ လူမှုရေး လုပ်ငန်းအကြောင်း နားလည် လောက် အောင် ဥာဏ်ရည် မမီသူ များလို့ ပြောရမလား အတွေး တိမ်တိမ်နဲ့ အထင်တလွဲ ဆုံးဖြတ် ချက် မြန်တဲ့လူတွေ လို့ ပြောရ မလား မမှန် သတင်းလွှင့် ချောက်ချ အပုပ်ချ မျိုးစုံအောင် ခံရပါတယ်။ တာဝန် လက်ရှိ ဗိုလ်မှူးတယောက် ကိုယ်တိုင် ရွာအထိ လိုက်လာ စစ်ဆေး ပြီးတဲ့အခါ မှာတော့ အဲဒီ ဗိုလ်မှူး ကိုယ်တိုင် က ကျောင်း အတွက် ကျပ်ငွေ ၂သိန်း လှူခဲ့ပြီး တွဲဖက် အစိုးရ မူလတန်းကျောင်းအဆင့် အထိ တိုးချဲ့ဖို့ ထောက်ခံစာ ရေးပေးပြီး လိုအပ်တာ တွေကို ကူညီသွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အဲလောက်ထိ နောက်ကြောင်း ရှင်း ပွင့်လင်း ခဲ့တာပါ။
ဒီအကြောင်းတွေကို ရေးပြနေတာ အကြောင်းရှိပါတယ်။ အလှူရှင်တွေရဲ့ အချိန်တွေ ငွေတွေ စေတနာတွေကို အသိအမှတ် ပြု ပါတယ်။ အလှူရှင်တွေ ဘက်က လူမှုရေးကို အမှန်တကယ် စိတ်ရင်း စေတနာနဲ့ လုပ်ကိုင် လှူဒါန်း ပေးနေသူတွေ မှာလဲ ဘ၀ နဲ့ ရင်းတဲ့ အချိန်တွေ ပေးထား ရသလို ငွေတွေ စေတနာတွေ သူတို့လဲ ထည့်ဝင် လှူဒါန်း နေတယ် ဆိုတာကို သိစေချင် တာပါ။ ဒီကြားထဲမှာ အနှောင့်အယှက် မျိုးစုံနဲ့ အခက်အခဲ သောင်းခြောက်ထောင်ကို ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်း နေရတာပါ။ ဒီကြားထဲမှာ ဟိုလိုမှ လှူချင်တာ ဒီလိုဆို ဘယ်လိုဖြစ် နေမှာပေါ့ စသဖြင့် လှူမယ့် ငွေလေး ကို ဖွားစော ကျောက်စာလောက် ထောင့်စေ့ချင် ကမ္ပည်း ထိုးချင်တဲ့ အလှူရှင် မျိုးနဲ့ ကြုံရရင် သူ့ရဲ့ သဒ္ဓါစိတ်လေး မပျက်ဖို့ ကိုယ့်မှာ ခန္တ်ီပါရမီ အင်မတန် ရင့်သန် ရပါတယ်။
ဒီအကြောင်းတွေကို ကျွန်မနဲ့ ခင်မင် ရင်းနှီးနေတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ စကားစမြည် ပြောရင်း သူတို့ မေးရင် ပြောဖြစ် ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ခင်မင် ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်တာ ကာလ အတွင်း တလကို အနည်းဆုံး ရက် ၂၀လောက် စိတ်ညစ်တယ်လို့ chatting ကနေ အော်ရင်း သူစိတ်ညစ် ပြေစေဖို့ ဖြန်ဖြေ နားထောင် ပုခုံးငှား ရင်ဘတ်ငှား အချိန်ပေး စကားပြော ခဲ့ရတဲ့ သူတယောက် ကိုတော့ ကျွန်မရဲ့ စိတ်ညစ်စရာ တွေကို ပြန် မဝေမျှ ခဲ့တာ ကျွန်မရဲ့ စေတနာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲလောက် စိတ်ရှည် သည်းခံ နေတဲ့ ကြားထဲက သူ့ရဲ့ ချစ်သူနဲ့ ၂ကိုယ်တူ အလှူ လှူချင်တယ် ဆိုလာပြန်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ကြည်စိုး အိုင်စီ ကြော်ငြာနဲ့ တူနေတဲ့ ကျွန်မရဲ့ အလှူလမ်းညွှန် ဂါထာကို ပြန်ရွတ်ပါတယ်။ မိဘမဲ့ မိန်းကလေးတွေချည့်သီးသန့် လှူချင် ရင်ရော ဆိုလာ ပြန်လို့ ဘလော့ဂါ ပင့်ခ်ဂိုးလ်တို့ ထာဝရ ပဒေသာပင် ဖြစ်အောင် သရက်ပင်တွေ သွားစိုက်လှူထားတဲ့ မြသိင်္ဂီမယ် သီလရှင် သင် ပညာရေးကျောင်းကို ညွှန်ရင်း ပင့်ခ်ဂိုးလ်ဆီကနေ လိပ်စာတောင်းပြီး ပေးခဲ့ရပါသေးတယ်။ ကျွန်မတို့ အဖွဲ့ကို မေးလာ တော့ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို အစကနေ နောက်ဆုံးအချိန်ထိ လှုပ်ရှားပုံ တိုးတက်ပြောင်းလဲပုံ ငွေစာရင်း ဓာတ်ပုံတွေက အစ အသေးစိတ် တင်ပြ ထားတဲ့ ဘလော့လင့်ခ်ရော ဘလော့ပေါ် မတင်ရသေးတဲ့ အခြေအနေတွေ အတွက် ဖော်ဝပ်မေးလ် တွေကိုပါ ပေးပို့ ခဲ့ပါတယ်။ လှူချင်ရင် လောလောဆယ် စိတ်ထဲ ပူပန်နေရတဲ့ ကျောင်းဆရာ လခကို လှူနိုင်ပြီး ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမှ လှူချင်သပ ဆိုရင် တော့ စာကြည့်တိုက်လို့ ပြောခဲ့တာပါ။ အဲဒီနောက် ရန်ကုန် ကော်မတီနဲ့ ဆက်သွယ် ချင်တယ် ဆိုလို့ ချိတ်ဆက် ပေးခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန် ကော်မတီဝင် ကိုလဲ သူ့ချစ်သူက စီးစီးပိုးပိုး ပြစ်တင် ပြောဆိုခဲ့တဲ့ အပြင် တခြား လှူဖို့ အဖွဲ့အစည်း တွေရဲ့ လိပ်စာ တွေကို မေးမြန်းခဲ့လို့ ရန်ကုန် ကော်မတီဝင် ကလဲ သည်းခံ စိတ်ရှည်ပြီး အလှူ အထမြောက် ပါစေလို့ သဘောထားပြီး ကူညီ ခဲ့ရ ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အလှူရှင် လုပ်ချင်သူပါလို့ ကြွေးကြော် ထားသူက မဟုတ်တမ်း တရားတွေကို ပြောပြချင်သော လို့ ခေါင်းစဉ်တပ် သူ့ဘလော့ပေါ် တင်ပြီး ကျွန်မကို စိတ်ဆိုး မာန်ဆိုး ရန်တွေ့၊ ရှိသမျှ ကော်မတီဝင်တွေကို ရွာကျောင်းက သာသနာ ပြု ဆရာတော်ကိုပါ မချန် စော်ကား ပြောဆို ထားတာတွေ မြင်လိုက်ချိန်မှာတော့ အံ့အားကြီး သင့်ရပါတယ်။ ဘယ်လို တွေ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ် ဆိုတာ ကို အသေးစိတ် ပြန်ပြောဖို့ ရန်ကုန် ကော်မတီဝင်ကို ပြန်မေးတဲ့ အခါ တွဲလျက်ပါ အတိုင်း အဖြေ ရခဲ့ပါတယ်။
အင်ဂျင်နီယာ အဖြစ် ဘယ်အိမ်ယာတွေ ဆောက်ခဲ့တယ် ဆိုရင် ကျွန်မ တချက် ပြန်ထောက် မေးချင် ပါတယ်။ ဓနိမိုး ထရံကာ ကျောင်းအိမ်သာ တလုံးကို တသိန်းနဲ့ ၂လုံးဆို ၂သိန်းကျမယ် လို့ အကြောင်း ပြန်တာကို အပြစ် တင်ထားတဲ့ အချက်ကိုပါ။ ဟုတ်ကဲ့ ဓနိပျစ်ကို ခေါင်းပေါ်ရွက်ပြီး အခင်းကြီး သွားခိုင်းမယ် ဆိုရင် ငွေ တသိန်း မကုန်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အိမ်သာ တလုံးကို အနည်းဆုံး ပင်မတိုင် လေးလုံး၊ ကြမ်းခင်း၊ ခေါင်မိုး တွဲဖို့ ထုတ် ဒိုင်း မြှား စတာတွေအတွက် သစ်ဝါးဈေး မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ဘယ်ဈေး ပေါက်လဲ ဆိုတာလေး ပြန်စုံစမ်း ပြီးမှ ရွာသားတွေနဲ့ ကော်မတီဝင်တွေရဲ့စာရိတ္တကို ဆုံးဖြတ် စော်ကား ရင်လဲ အချိန်မနှောင်း ပါဘူး။
နောက်ပြီး ဘလော့ပေါ်က ကောမန့် ပေါ်မှာ ကျွန်မက ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ နာမည် မဖော်ထား ပါဘူးလို့ တဖက် က ကြေညာ ထားပြီး ဖော်ဝပ်မေးလ်တွေ ထပ်ဆင့်ပေးပို့ နာမည်ဖျက် ထားတာဟာ အင်တာနက် ဥပဒေ စာပေ ရေးသား ခြင်းဖြင့် အသရေ ပျက်စေမှု ဥပေဒတွေနဲ့ တရားစွဲဆို လို့ ရတယ် ဆိုတာလေး သတိချပ်စေ ချင်ပါတယ်။ မဟုတ်တမ်းတရားတွေကို အမှားကို အမှန်လုပ် လိပ်ကိုမျောက် ဖြစ်အောင် သက်သေပြု ရေးသား ထားလို့ပါ။ ထိုင်းကော်မတီဝင် ကျွန်မရော ရန်ကုန် ကော်မတီဝင် ကပါ ငွေလှူဖို့ အတင်းအလှူ မခံသလို ကုန်ကျစရိတ် တွေကိုလဲ အရိုးသားဆုံးပဲ ပြောခဲ့တာပါ။
နောက်ဆုံး တချက် ပြောချင်တာ ကတော့ ကော်မတီဝင်တွေ အားလုံးက သုံးသပ်ကြတဲ့ စကားတခွန်း ကြောင့်ပါ။ အလှူရှင်နဲ့ ကျွန်မကြား ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ရန်ငြိုးရန်စ မနာလို မုန်းထား ရှိသလားတဲ့။ စချဉ်းကပ်ပုံ ကနေ နောက်ဆုံး အချိန်ထိ လုပ်သွားပုံကို သုံးသပ်ရတာ လှူချင်လို့ ချဉ်းကပ်တာ မဟုတ်ဘဲ နာမည်ဖျက် ချင်လို့ အလှူကို ဗန်းပြ ချဉ်းကပ် တာနဲ့ တူနေလို့ ပါတဲ့။ ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်မကို မုန်းရင် ကျွန်မကို ထိခိုက်အောင် လုပ် ချင်ရင် ကျွန်မ တယောက် တည်း ထိခိုက်အောင် လုပ်ချင်တာ လုပ်ပါ။ သံသရာ ဘ၀ အဆက်ဆက် က ၀ဋ် ဟောင်းတွေ ကုန်အောင် ကံသစ် တွေ ရင်းပြီး ချွတ်ပေးတဲ့ သူအဖြစ် ကျွန်မ ကျေးဇူး တင်လိုက်ပါ့မယ်။ ဒါပေ မယ့် နဂို ကံဆိုး ပြီးသား အမိမြေက ဒုက္ခသည် တွေကို မစော်ကားပါနဲ့။ ဘ၀ပျက်လို့ နာလံမထူ နိုင်အောင် နာကျင် ပြီးသား လူ တွေကို ပို နာကျင် အောင် မလုပ်ပါနဲ့။ သူတို့ရဲ့ လာဘ်ကို မပိတ်ပါနဲ့။ ပြီးတော့ စေတနာ ဖြူစင် အကျင့်သီလ သန့်စင် လွန်းတဲ့ ကော်မတီဝင် တွေရဲ့ စာရိတ္တကို မစော်ကား ပါနဲ့။ အကြံပေးသူ ပြုလုပ် သူ ပူးပေါင်း ပါဝင်သူ တွေအပြင် အကြောင်းစုံကို သေချာ မသိသူတို့ အထင်လွဲ ပြစ်မှားမိရင် အကုသိုလ် ဖြစ်မှာ လူအများမို့ အပြစ် ကြီးလေးလွန်း လှပါတယ်။ အမိမြေက သွေးချင်းတွေ ၀ဋ်ကြီးလို့ ကပ်ဘေး တွေနဲ့ တိုက် ရိုက် ရော သွယ်ဝိုက် ပြီးပါ ဒုက္ခရောက် နေချိန်မှာ ၀ဋ်အသစ် တွေ ထပ်မပေးပါနဲ့။ ကျွန်မရဲ့ ၀ဋ်ဟောင်းတွေ လျော့အောင် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ မြတ်နိုး တယောက် နှလုံး စိတ်ဝမ်း ငြိမ်းချမ်းပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 4:18 AM
သူ က အော်ကြော်လန်လေအမရယ်
သူနဲ့ သွားမယှဉ်ပါနဲ့ ..
သူက ဘာမို့ လို တခါတခါ မြန်မာဆိုသူ့ စရင်းထဲက ဖျက်တယ်လို့ တောင် ဘလော့မှာရေးသေးတာပဲ.
သူဘာလည်းဆိုတာ သူ့ ကိုယ်သူရောသိရဲ့သားပဲ
အသက်ကြီးမှ ရီးစားရတော့လည်း .အဲ့ရီးစားကိုကြောက်ရမပေါ့..
သိသာသိစေမမြင်စေတဲ့အရာတွေ မှာ နိုင်ငံခြားမှာနေသူတိုင်း ရီးစားဆိုတဲ့ အရာကို နားလည်ပီးသား
သူ့ ကြမှ ယောက်ျးလေးအိမ်သွားအိပ်တာ ဘလော့ပေါ်ကနေပြောနေတယ်..
သူ့ နဲ့ ပြိုင်မဖြစ်နဲ့တော့ အမရေ
စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ ညီမရယ်နာဂစ်ဒေသကိုသွားခဲ့ဖူးတော့ဒေသခံတွေဘယ်လိုခံစား ရတယ် ဆိုတာ သိပါတယ်။
စေတနာ အကျိုးပေးပါတယ် ညီမရယ်။
တခါတလေ ကိုယ်မအားလို့အင်တာနက်ပေါ် မတက်နိုင် အင်တာနက် မကောင်းလို့ မတက်နိုင် မိသားစုအရေး ကြောင့် မတက်နိုင်တာတွေ ရှိပါတယ်။ အကြောင်းမပြန်ချင် တာ မဟုတ်တာလဲ သူသိပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေး ပါတယ်။
ညီမ ၀မ်းမနည်းပါနဲ့ကိုယ့်စေတနာကိုယ်အကျိုးပေး ပါတယ်။